Igbo, John: Lesson 029 - Jisos na - edu onye na - akwa iko rue ncheghari (Jọn 4:1-26) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 029 (Jesus leads the adulteress to repentance)
a) Jisos na - edu onye na - akwa iko rue ncheghari (Jọn 4:1-26)
16 Jizọs sịrị ya: "Gaa kpọọ di gị, bịakwa ebe a." 17 Nwaanyị ahụ zara ya, sị: "Enweghị m di." Jizọs sịrị ya: "I kwuru nke ọma, sị, 'Enweghị m di.' enweela di ise; ma onye ị nwere ugbu a abụghị di gị. Nwanyi a si Ya, Onye-nwe-ayi, ahurum na Jerusalem bu ebe ndi kwesiri ikpọ isi ala nye. 21 Jisus si ya, Nwanyi, kwerem, oge hour nābia, mb͕e ọ dighi n'ugwu a, ma-ọbu na Jerusalem , ị ga-efe Nna m. 22 Ị na-efe ihe ị na-amaghị. Anyị na-efe ihe anyị maara; n'ihi na nzọpụta sitere n'aka ndị Juu. Ma oge hour nābia, ma ub͕u a, mb͕e ndi nākpọ isi ala gākpọ isi ala nye Nnam nime mọ na ezi-okwu: n'ihi na Nnam nāchọ ka ha buru ndi nēfè Ya òfùfè. 24 Chineke bu mọ, ndi nākpọ kwa isi ala nye Ya aghaghi ikpọ isi ala nime mọ na ezi-okwu.
Mgbe Jisos kpaliri nwanyi ahu akpiri nku miri, ma nye ya ochicho maka onyinye Chineke, o gosiputara ya ihe ngbochi egbochi ya inweta onyinye a - nmehie ya. Ọ dịghị ebo ya ebubo na-ekwu, "Ị bụ nwanyị na-akwa iko," kama jiri nwayọọ gwa ya ka ọ kpọọ di ya. Arịrịọ a mere ka ọ daa iwe. Dị ka ụmụ nwanyị niile, ọ chọsiri ike ichedo ma lekọta di. Ma ọ bụ naanị ya na ndị eleda anya, ma ọ chọghị igosi Jizọs ihere ya. N'ihi ya, o chebere onwe ya site n'ịsị, "Enweghị m di."
Jizọs kwadoro okwu ya na obu eziokwu, onye maara ihe omimi nile. Ọ maara na ọ gbahapụrụ na naanị ya, na-achọ ịhụnanya site na ọchịchọ ọjọọ, ịda site na otu mmehie n'ime ọzọ.
Omume ọ bụla ịkwa iko bụ ọdachi, na-agbagọ akọnuche, na ịmalite mmetụta uche anyị, ndị a ma ama na ụmụ nwanyị. Otu nwanyị ka na-enwe agụụ maka di ya ọbụna mgbe nkewa a gbasasịrị, na-echegbu onwe ya maka nlọghachi na nghọta.
Ugbu a, ọ ghọtara na Jizọs abụghị mmadụ efu; ya bụ nghọta amụma. N'ịbụ onye dị ala, ọ maara na ọ bụ nanị Chineke nwere ike inyere ya aka. Ma ebee ka ọ ga - achọta ya? N'ụzọ dị aṅaa? Ekpere na ememe abughi ndi ozo. Ruo ọtụtụ afọ, ọ gara ụlọ ọrụ okpukpe ọ bụla, n'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-agụsi anya ike ịnapụta Chineke na udo.
Mgbe Jisos kpaliri ime ka o sie ike ime ka o di ocha, o duuru ya ka o gh ota na ebe a na-efe ofufe abughi ihe di nkpa, kama o bu Onye ahu ga-efe ofufe. O kwuputara na Chineke bu Nna nke eluigwe. O si otú a nye ya nzọpụta nke ya na ihe kachasị mkpa nke ịmara Chineke. O ji okwu bụ "Nna" mee ihe ugboro atọ. Ọ bụghị amamihe ma ọ bụ nsọpụrụ nke na-emepụta ihe ọmụma nke Chineke, kama okwukwe na Kraịst naanị.
Jizọs mere ka o doo anya na obugh chi obula kwesiri aha Nna. Ndị Sameria ji asọpụrụ chi dị iche iche. Ebe ndị Juu maara onye bụ Onyenwe anyị, onye kpugheere onwe ya n'akụkọ ihe mere eme, ma kwe nkwa na Onye nzọpụta maka ụwa ga-apụta n'ụlọ David.
Okpukpe nke Akwụkwọ Nsọ ga-abụ n'ụwa niile. Kemgbe ahụ, a tọhapụrụ ụgbọ mmiri nke Chineke site na njikọ ya na otu ụlọ nsọ. Ndị kwere ekwe ga-abụ Ụlọ Nsọ nke Chineke, na Mmụọ na-ebi n'ime ha; ndụ ha nile na-aghọ ofufe nke otuto Chineke. Mgbapụta Kraịst ga-abụ ọdịiche ha, ebe ha banyere oke ịhụnanya Ya. Ha ahọrọwo ndụ nke ziri ezi, n'eziokwu, dị ọcha na ike Ya. Nna ha nke eluigwe emeela ka ha dị ọhụrụ. Ha ji obi ha dum na-asọpụrụ. Chineke na-enwe obi ụtọ mgbe ụmụ Ya na-akpọrọ Ya okwu n'amaghị ama, na ekele na ntinye dịka "Nna anyị nke eluigwe."
Chineke bụ Mmụọ, ọ bụghị arụsị ma ọ bụ ọdịdị. Ọ bụ Nna anyị, anyị makwaara Mmụọ Ya. Ọ maara adịghị ike anyị na enweghị ike ịbịaru Ya nso. O biara anyi nime okpara, mee ka anyi di nso site n'àjà Ya iji nweta Mmo Ya. Chineke choro inwe otutu umu; naanị ụmụ Ya nwere ike inye ezi ofufe na mmụọ na n'eziokwu. Anyị na-ekpegara Nna anyị ekpere ka O jupụta na Mmụọ Ya na eziokwu na amara ya ka ndụ anyị wee bụrụ nzaghachi nye ịhụnanya Ya.
Ọ dịghị onye pụrụ ife Chineke n'ụzọ dabara adaba, ya mere Jizọs nyere anyị onyinye nke Mmụọ Nsọ. Na Ya ka anyi na-aghọ ndi ozo di ka ndi kwesiri ntukwasi obi, ndi oru obi uto, na ndi akaebe di ike Mgbe ahụ, ndụ anyị ga-abụ ofufe nke Nna anyị hụrụ anyị n'anya n'ike mmụọ nke na-asọ site n'obe Kraịst.
Kraịst emeela ka ụlọ nsọ ahụ dị ọcha iji guzobe ezi ofufe. E kpughere Nna ya nime Kraịst nye nwanyị ahụ na-eme mmehie. Nkwupụta nke mmehie ya na akpịrị ịkpọ nkụ maka mmiri dị ndụ, Jizọs nyere ya amara.
EKPERE: Nna anyi nke eluigwe, anyi na ekele gi na i choro ka anyi na-akwanyere gi obi, ka ido gi nso na ije anyi, n'eto otuto gi. Mee ka ofufe anyị dị ọcha. Mee anyi ndi ohu ndi naeso Okpara gi, ndi nyere gi otuto mgbe nile. Mejuputa anyi na Mo nke ekpere, iji meghachi omume n'okwu gi nke si na ozioma puta.
Gịnị na-egbochi ezi ofufe, gịnịkwa na-emetụta ya n'ezie?
25 Nwanyi ahu si Ya, Amataram na Mesaia nābia, (onye anākpọ Kraist). "Mgbe ọ bịara, ọ ga-eme ka anyị mara ihe niile." 26 Jizọs sịrị ya: "Ọ bụ m bụ onye na-agwa gị okwu."
Nwanyị ahụ nwere ike na eziokwu nke okwu ịhụnanya Jizọs, ọ chọkwara ịhụ mmezu nke nkwa ndị ọ na-enye ya. O chetara amụma ahụ banyere ọbịbịa nke Kraịst. Enwere olile anya ya n'aha ya ma kwenye na ọ bụ nanị ya nwere ike ịkọrọ ya banyere ezi ofufe nke Chineke.
N'ụzọ dị ịtụnanya, Jizọs ekpugheghị onwe ya n'ụzọ doro anya dị ka o mere ebe a n'ihu nwaanyị a, n'oge ọ bụla ọ bụla. O kwuru na ọ bụ onye ahụ a na-atụ anya Ya, nke Chineke zitere, jupụta na Mmụọ Nsọ. "Mụ onwe m bụ onyinye Chineke nye mmadụ, okwu Chineke tinyere mmadụ na nzọpụta a kwadebeere mmadụ nile."
Nwanyị ahụ ahụghị Mezaịa ahụ pụtara Eze nke ndị eze, onyeisi ndị amụma na Nnukwu Onye Nchụàjà. O nwere ike nụ na ọbịbịa ya ga-ejikọta ya na mbilite n'ọnwụ na mgbasa udo n'elu ụwa. Ọ pụkwara ịbụ na ọ nụla banyere nrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị Juu metụtara aha a. Mana ihe o choro bu onye nzoputa iji gbaputa ya na nmehie, ya mere o kwenyere na Kraist puru ime nke a.
Jizọs we si ha, Mu onwem bu Onye nāgwa unu okwu. Eluigwe na-eme atụmatụ na nkwa nke ndị amụma na-ezukọ na okwu a "ABỤ M." Ọ dịghị mmadụ ọ bụla pụrụ ikwu n'ụzọ doro anya na ọ bụ Mezaịa ahụ. Mgbochi Kraịst ga-abịa, onye ga-eme ụdị nkwupụta dị otú ahụ na-ezighị ezi. Ma Kraịst bụ onye nwere ịhụnanya nke na-adịghị elelị onye mmehie ọ bụla na-amaghị ama, kama ọ ga-emere ọbụna nwanyị ọbịa nke Sameria ebere. Ọ bụ ebere abụghị ikpe.